Warshadaha Nidaamka Aluminium Door Nidaamka, Shirkadaha - Shiinaha Soosaarayaasha Nidaamka Aluminium Door
Nidaamka albaabka FOEN J100 wuxuu soo bandhigayaa xal dhameystiran oo dhismaha ah; Saddex xarig oo caag ah ayaa la xiray, iyo xargaha dhexda ayaa si buuxda u siineysa shaqada mabda'a daahyada roobka, si waxsoosaarku u leeyahay hawo wanaagsan iyo biyo adag. fahmi kara furitaanka qeybaha ballaaran, oo ay fududahay in la daboolo baahiyaha dhismayaasha kaladuwan ee kaladuwan; Qaabka qaab dhismeedka taageerayaasha banaanka ayaa waliba muuqaalka dhismaha ka dhiga mid aad u sahlan oo qurux badan, kuna habboon mashruucyada dhexe iyo sare.
Nidaamka Window FOEN Smart-5-FOEN J168 Saddex Xarig Iskuxirid Bixin
Nidaamka albaabka qulqulaya wuxuu bixiyaa xalka guud ee dhismaha; Sedex xarig oo caag ah ayaa la xiraa, iyo dhexda caaggu wuxuu si buuxda u siiyaa shaqada mabda'a daahyada roobka, si sheygu u helo hawo fiican iyo wax qabad adag. fahmi kara furitaanka qeybaha ballaaran, oo ay fududahay in la daboolo baahiyaha dhismayaasha kaladuwan ee kaladuwan; Qaabka qaab dhismeedka taageerayaasha banaanka ayaa waliba muuqaalka dhismaha ka dhiga mid aad u sahlan oo qurux badan, kuna habboon mashruucyada dhexe iyo sare.
Doorwin waxaa loo meeleeyay inuu ku bixiyo qiimaha ugufiican ee daaqadaha aluminiinka alwaaxda leh. Waxaan dooneynaa inaan ka dhigno mid waara, tamarta wax ku ool ah iyo alaab qurux badan oo lagu heli karo dhammaan miisaaniyadaha. Waxaan ku dadaalnaa inaan siino khibrada adeegga macaamiisha ugu fiican oo leh nashqadeyn kooxeed iyo injineerro loogu talagalay mashaariicda caadiga ah iyo koox iibiya hibo leh oo si dhaqso leh uga jawaaba su'aalaha.
Taariikhda ugu Weyn ee Wershadaha Aluminium laga sameeyay Shiinaha
FOEN waa shirkad balaaran oo balaaran, kuna takhasustay soosaarka astaamaha aluminiumka, nidaamka daaqada, tuubooyinka birta ee birta ka sameysan iyo qalabka darbiga. Ka dhex jira soosaarayaasha Soosaarayaasha Profile Aluminium 5-ta Shiinaha.
Profile Wershadaha Aluminium Tayada Sare ee daahyada daahyada 46
6063 T5 T Slot Track Profileion Aluminum Extrusion Profile